Home › Uppercut Deluxe - Matte Clay
Single - MMK 45,000 MMK3Pack - MMK 133,000 MMK
--Super Strong | Matte Finish | Easy Wash Clay--
သိပ်သည်းသော Concentrated Formula နှင့် သဘာဝဆံသားအတိုင်း အနေတော်တောက်ပြောင်စေမှု Natural Matte Finish တို့ကိုပေးကာ၊ တာရှည်ခံအားအလွန်ကောင်းသော Super Strong Hold ထိန်းအားဖြင့် ချွေးဒဏ်၊ ရေဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်ပြီး တစ်နေ့တာပုံကျနေစေမဲ့...
Uppercut Deluxe - Matte Clay သည် ကမ္ဘာကျော် အရည်အသွေးမြင့် Premium ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Uppercut Deluxe - Australia နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားသော ခေတ်ပေါ် Clay အမျိုးအစားခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းသောပုံသွင်းနိုင်စွမ်းနှင့် Clay အမျိုးအစားခေါင်းလိမ်းဆီတို့၏ ဆံပင်ကို Volume ထူထူထဲထဲဖြစ်စေပြီး၊ Texture အရေးအကြောင်းများကောင်းကောင်းပေးနိုင်သော အာနိသင်တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့် ဆံပင်အမျိုးအစားနှင့် ဆံပင်ပုံစံအများစုအတွက်သင့်တော်ပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဆံပင်ပုံစံများနှင့် ခေတ်ပေါ် ဆံပင်ပုံစံများအားလုံးကိုသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အလွန်တာရှည်ခံသည့် ထိန်းအားအကောင်းဆုံး Strong Hold ပါရှိပြီး၊ ဆံပင်ကို သဘာဝဆန်ဆန် Natural Matte Finish နှင့် အချိန်မရွေးဆံပင်ပုံစံပြောင်းနိုင်စေကာ၊ ပုံသွင်းမှုစွမ်းအားအလွန်ကောင်းသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြသည့် ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်ပေါ် Clay အမျိုးအစား
Uppercut Clay was designed for guys on the run that like to rework their style throughout the day.
This strong Clay is best used to create shorter, textured looks where control is required.
Beingawater based product, Uppercut Clay is completely reworkable and won’t come out with water, which makes it perfect for active guys.
Sweet Cologne Fragrance